politika Fiarovana fiainan'olona | component-mg.com
1. Fampiasana votoatin'ny tranonkala
Manana ny zony handika ny atin'ny tranokala sy ny atin'ny tranokala ity ny tranokala ho an'ny fampiasanao manokana. Ny atiny voarakitra ao amin'ny zon'ny mpamorona sy ny fanamoriana hafa, tokony hajaina ianao ary hitazona kopia iray. Raha ny votoatin'ny tranokala tsy misy fanambarana marina dia tsy midika hoe tsy manan-jo ilay tranokala, tsy midika izany fa tsy mitaky zon'olombelona ilay tranonkala, ary tokony hanaja ny fitsipiky ny finoana tsara sy ny tombontsoan'ny ara-dalàna amin'ny fampiasana ara-dalàna ianao. Azonao atao ny manova, mandika, mampiseho ampahibemaso, mamoaka na mizara fitaovana toy izany na amin'ny fomba hafa na amin'ny fomba hafa na amin'ny lafiny ara-barotra na ara-barotra. Fady ny iray amin'ireto fitaovana ireto amin'ny tranokala hafa na haino aman-jery printy na tontolon'ny informatika. Ny atin'ny tranonkala sy ny fanovana ny endrika fiarovana ara-dalàna amin'ny alàlan'ny lalàna momba ny zon'ny mpamorona, ny fampiasana tsy nahazoana alalana dia mety hanana zon'ny mpamorona, mari-barotra ary zon'ny lalàna hafa. Raha tsy manaiky na mandika ireo fepetra ireo ianao dia hofoanana ho azy ny alalana hampiasanao tranokala ary tsy maintsy manimba avy hatrany ireo fitaovana alaina na pirinty ianao.
2. Tranonkala fanaparitahana vaovao
Ny fisian'ny atiny amin'ity tranonkala ity tsy misy karazana antoka. Tsy manome antoka ny tena marina sy ny fahafenoana. Ny tranokala amin'ny vokatra, teknolojia, programa, vidiny ary ny fizarana dia hiova tsy misy fampandrenesana. Mety efa tapitra ny atin'ny tranokala, Component-en.com. Tsy misy fanoloran-tena hanavao azy ireo. Ny famoahana fampahalalana mahery vaika mety ho eo an-toerana dia mbola tsy mahazo ny vokatra, ny fizotrany na ny serivisy, azonao atao ny mampihatra ireo fifandraisana amin'ny Component-en.com Business sy mpizara.
3. Fandefasana mpampiasa
Ho fanampin'ireo fepetra manokana momba ny fiainana manokana, hafa noho ireo dia mandefa na mandefa izay atolotrao amin'ilay tranokala ianao, na ny fampahalalana mifandraika (izay antsoina matetika hoe fampahalalana) dia horaisina ho tsy tsiambaratelo sy tsy fananana. Ny fampiasanao an'ity tranonkala ity dia tsy handika lalàna, lalàna ary fitondran-tena ampahibemaso, na tsy handefa mailaka na tsy handefa zavatra tsy ara-dalàna, mandrahona, manala baraka, manala baraka, mamoafady, mametaveta na zavatra hafa tsy ara-dalàna. Raha manana atiny sy fitaomana fampahalalana ny olona dia misy porofon'ny fampitandremana na fanoherana an'ity tranonkala ity fa aza misalasala mamafa ny hafatra na fampiatoana tsy misy fetra ny fampahalalana amin'ny tranokala, raha tsy mila fahazoana alalana mialoha, tsy misy adidy handefa ny fampandrenesana, ny toe-javatra dia matotra, ity tranonkala ity dia azo esorina amin'ny mpampiasa.
4. Ireo mpampiasa dia mifanakalo atiny
Component-en.com Live up hanaraha-maso na hamerenana ny mpampiasa handefasana na handefasana hafatra na hifampiresahana fotsiny amin'ny fampahalalana tsirairay amin'ny lafiny rehetra amin'ny fandraisana andraikitra, ao anatin'izany fa tsy voafetra amin'ny efitrano fifanakalozan-dresaka, Forum Component-en.com na forum an'ny mpampiasa hafa, ary fifanakalozana atiny.Component-en.com Ho an'ny atin'ny fifanakalozana toy izany dia tsy mitaky andraikitra na inona na inona, na inona na inona antony mahatonga ny fanalam-baraka, ny fiainana manokana, ny vetaveta, na ireo olana hafa.Component-en.com Voatazona rehefa hita fafao dia raisina. toy ny votoaty manaratsy, manala baraka, vetaveta na maharikoriko amin'ny fahalalàna vaovao.
5. Site handefasana rindrambaiko hampiasaina
Raha misintona rindrambaiko amin'ny fampiasana rindrambaiko ianao hanarahana ny fifanarahana fahazoan-dàlan'ny lozisialy hitondra ireo fehezan-dalàna momba ny lisansa rindrambaiko rehetra. Rehefa mamaky sy manaiky ny fifanarahana fahazoan-dàlana lozisialy ianao alohan'ny tsy ahafahan'ny fepetra misintona na mametraka ilay rindrambaiko.
6. Rohy mankamin'ny tranokalan'ny antoko fahatelo
Ny rohy tranokala mankamin'ny tranokalan'ny antoko fahatelo dia mora aminao fotsiny. Raha mampiasa ireo rohy ireo ianao dia hiala amin'ny tranokala.Component-en.com Tsy nandinika tranokala an'ny antoko fahatelo, ireo tranonkala sy ny ao anatiny dia tsy mifehy, raha tsy tompon'andraikitra. Raha manapa-kevitra ny hiditra amin'ny rohy mankany amin'ny tranokalan'ny antoko fahatelo ianao, ny mety ho vokany sy ny loza mety hitranga amin'ny anao manokana.
7. Famerana ny andraikitra
Component-en.com Ary ny mpamatsy azy na ny antoko fahatelo voalaza dia tsy tompon'andraikitra amin'ny fahasimbana (ao anatin'izany fa tsy ferana amin'ny tombom-barotra very, ny data very na ny fahatapahan'ny orinasa nateraky ny fahasimbana), na ny fampiasana izany fahasimbana izany na tsy afaka mampiasa ilay Tranonkala, ary ny rohy momba ny tranokala na tranokala na loharanom-baovao voarakitra ao anatin'ireo tranokala ireo no nahatonga izany, ary na inona na inona izy ireo dia manana izany fifanarahana izany, fampijaliana na fototra ara-dalàna hafa mialoha ary izany dia fahasimbana toy izany dia mety hitranga torohevitra. Raha mampiasa an'ity tranonkala ity ianao ho toy ny valin'ny fampahalalana na angon-drakitra ilaina amin'ny fikojakojana ny fitaovana, fanamboarana na fanitsiana, dia tokony ho fantatrao fa ny azy manokana dia tsy maintsy miatrika ny vola lany rehetra aorian'izany.Component-en.com Raha misy ireto toe-javatra manaraka ireto tsy misy andraikitra: ny fampitana fampahalalana avy amin'ny mpamatsy tolotra tambajotra (Component-en.com. Ary ny olona nahazo alàlana) hafa noho ilay natomboka; ny fampitana fampahalalana, ny fivezivezena, ny fifandraisana ary ny fitehirizana dia omen'ny fizotran'ny teknika mandeha ho azy ilaina, ny fisafidianana ny mpanome tolotra serasera vaovao; ho fanampin'ny fepetra takiana amin'ny valiny mandeha ho azy, ny serivisy serivisy serasera dia tsy mifidy ireo mpanome vaovao sy mpandray; rafitra mpamatsy serivisy tambajotra na mpanelanelana amin'ny tambajotra na fitahirizana vonjimaika ny kopian'ny fampahalalana amin'ilay takelaka, amin'ny toe-javatra mahazatra, tsy nisy olona hafa ankoatry ny mpandray nokasaina nahazo ny fotoana voatokana tsy mihoatra ny mpandray kasaina hanomezana fidirana amin'ny fampitana, fampandehanana na amin'ny fampifandraisana amin'ny fotoana mety; amin'ny alàlan'ny rafitra na fandefasana tamba-jotra ny atiny fampahalalana.
8. Fitsipika ankapobeny
Component-en.com Mety hanova ireo teny ireo amin'ny fotoana rehetra. Tokony hitsidika ity pejy ity ianao hahafantarana ireo teny misy ankehitriny, satria mifandray akaiky aminao ireo teny ireo. Ny fepetra sasany amin'ireto fehezanteny ireto dia mety amin'ny pejy sasany amin'ny alàlan'ny fampandrenesana voatonona mazava na nosoloina.